Kumenywa amaqembu kowe-Acapella | News24
Kumenywa amaqembu kowe-Acapella
KUMENYWA wonke amaqembu ukuba abe yingxenye yomncintiswano we-Acapella ngoMgqibelo wona lo njengoba kuzokhethwa kuwo amaqembu amathathu azodlulela esigabeni sama-finals.
Lo mncintiswano uhlelwe Uhologo Production okuyisitebela sikaMnu Themba Njilo.
Ngokusho ko mhleli walo mncintiswano uMnu Thula Mhlophe, bonke abanekhono kulolu hlobo lomculo lapho kusuke kuculwa khona ngaphandle kokusetshenziswa kwezinsimbi bayamenywa.
“Simema bonke abaculi noma amaqembu alolu hlobo lomculo ngaphandle kwabaculi baka masikandi nesicathamiya, simema bonke-ke abanye.Lo mncintiswano ubuzungeza kubo bonke omasipala besifunda Mgungundlovu ukuzobheka amakhono. Okuzokwenzeka ukuthi lawo maqembu amathathu azophumelela azoklonyeliswa ngo-R1000, kuzobe sekulandela isigaba sama-finals lapho bezobe sebhekene nalaba abanye abaphumelele nabo kwabanye omasipala.
“Simema wonke-ke amaqembu ukuthi aphume ngobuningi bawo eze kulo mncintiswano,” kunxusa uMhlophe.
Uthe lowo oyodla umhlanganiso esigabeni sama-finals uzobe esethola inkontileka yokusayina abe ngaphansi kwesitebele Uhologo Production.
“Uzothola ukululekwa kanye nayo yonke into njengomuntu ozobe esayinde ngaphansi kwalesi sitebele. Bayamenywa bonke abantu futhi bayaziswa ukuthi ukujoyinela ukuba yingxenye yalo mncintiswano kumahhala, akukho mali ekhokhwayo. Bayacelwa ukuthi basheshe bafike ngoba kubhaliswa ngalo usuku lo mncintiswano.,” kuchaza uMhlophe.
Uzoba se-AF Wood eduzane nomtholampilo i-East Street kanti umcimbi uzoqala ngo 9 ekuseni.
Abafuna ulwazi olunye mayelana nalokhu bangathinta uMhlophe ku- 082 836 6403